Archives momba ny Adventure & Activities - IntoKildare
Alao ny hazakazaky ny fonao amin'ny alàlan'ny fitsangatsanganana an-kalamanjana, miaina ny fahagagana amin'ny lalao golf kilasy eran'izao tontolo izao, na mampitony na dia ny fanahy be karohina indrindra aza amin'ny fitsangantsanganana amina lakandranon'i Kildare malaza.
Ny fientanam-po sy ny fikorontanana ao amin'ny Co. Kildare dia tsy voafetra ho an'ny fanatanjahan-tena mpitaingin-tsoavaly ihany - fa ny distrika koa dia tranon'ny ivon-toerana fitsangatsanganana tsara indrindra any Irlandy mba hitazonana ny fifalian'ny junkies adrenalin. Avy amin'ny fandefasana an'i Lewis Hamilton ao anaty ao aminao Mondello amin'ny zana-tsipìka sy ny loko amin'ny Redhills, Kildare no toerana mety tsara hitazonana ny volon'ireo zatovo tsy mihetsika (ary tsy misy efijery hita maso!).
Eritrereto ny hetsika ivelany sy ny golf mety ho tonga ao an-tsainao ihany koa. Isan-taona, ny taranja malaza sy taloha dia mitaky mpilalao golf an'arivony maro manerana an'izao tontolo izao hiaina ny fanatanjahantena.
Ny sambo sy ny sambo ao Kildare dia traikefa izay lalina kokoa noho ny fahafinaretana eo noho eo ambony rano. Eto, dia fitsangatsangana taloha koa ny dia an-dàlana amin'ny làlantsarantsika. Satria mandeha amin'ny lalan-drano iray ihany ianao - ary mankafy ireo vistas mitovy - izay ampiasain'ny olona tsy tambo isaina nandritra ny taonjato maro talohanao. Miaraka amina renirano sy lakandrano 82 kilaometatra i Kildare dia paradisa ho an'ireo tia rano.
Community Manohana any an-toerana Café mihodina Fianakaviana ankohonany Trano sy zaridaina Mandeha an-tongotra sy mandeha an-tongotra Natiora sy Biby Cycling Golf Eo ambonin'ny rano lalana Zavatra maimaim-poana hatao Vatosoa miafina Andro orana Atsinanana Fahiny any Irlandy
Mpitondra any Irlanda amin'ny fikatsahana any ivelany dia manome Clay Pigeon Shooting, Air Rifle Range, Archery ary Centre Equestrian.
Fitsangantsanganana an-tsambo Athy
Fitsangatsanganana an-tsambo mahavariana ao amin'ny The Barrow & Grand Canal miaraka amin'ny fomba fijery kanto sy endrika miaina.
Mandehana fitsangantsanganana an-tsambo miala sasatra mamakivaky ny ambanivohitra Kildare amin'ny sambo lakandrano nentim-paharazana ary tadiavo ny tantaran'ireo làlana.
Hetsika orinasa mandresy loka sy hetsika fananganana ekipa ho an'ny vondron'olona 10 - 1000+.
Klioba fialam-boly marobe misy loka marobe miaraka amin'ny dobo filomanosana 25m, spa, kilasy fanatanjahan-tena ary kianja filalaovana astro misy an'ny rehetra.
Nandritra ny ora maro nahafinaretana, KBowl no toerana iarahana amin'ny bowling, faritra filalaovan'ny ankizy Wacky World, KZone ary ny KDiner.
Adventure sy hetsikatrano fisotroana kafe
Fifangaroana lova tsy manam-paharoa, fitsangatsanganana ala, zava-boary, tanety, zaridaina mahafinaritra, fitsangatsanganana fiaran-dalamby, toeram-pambolena biby fiompy, tanànan'ny angano ary maro hafa.
Fitsangatsanganana an-dàlam-be vita amin'ny fanamboarana an'i Irlandy.
Iray ihany ny toerana misy ny motorsport iraisam-pirenena any Irlandy no mihazona fampianarana manokana momba ny fiofanana mitondra fiara, hetsika ataon'ny orinasa ary hetsika mandritra ny taona.
Tsy misy maharesy ny fientanam-po amin'ny hazakazaka any Naas. Sakafo, fialamboly ary hazakazaka mahafinaritra!
Ny tranon'ny Irish Jump Racing ary mampiantrano ny Punchestown Festival malaza dimy andro. Hetsika kilasy eran-tany.
Ity toerana tsy manam-paharoa ity dia manolotra fonosana feno ho an'ireo tia lalao ady miaraka amina hetsika mampientanentana adrenalinina.
Ny hazakazakazakazaky Curragh
Ny hazakaza-tsoavaly soavaly iraisam-pirenena voalohany any Irlandy ary iray amin'ireo toeram-panatanjahantena malaza indrindra eto an-tany.
Ny traikefa manaitra
Fanandramana ara-kolontsaina tsy manam-paharoa izay mankalaza ny fanatanjahantena fanipazana amin'ny fahafinaretana be dia be ary ny sasany amin'ireo sary mahafinaritra sy sary mahafinaritra.
Ny Maze Kildare
Ny maze fefy lehibe indrindra an'i Leinster dia manintona mahatalanjona any ivelan'ny Prosperous any ambanivohitra Kildare Avaratra.